Soomaali - Retrouver un proche
Waxad raadini qof ka mid ah dadkaagi ?
Did u soo celin xirirka dadkaga ama qoyska marka la eego
Buuqa iyo argagixisada ka dhalanaya dagalada iyo musubooyinka dabiiciga aya sabab unoqonkarra inay qoysasko iyo dadkii qarabada aha kala luman daqiqado gudohod. Hayada Laanqayrta Cas aya 4 siyabod dadkas ku cawinkarta.
Markaad tahriib ku jirto inad qofkad jaclayd kala lumin wa muhim.
Talooyin fudud ayaa mararka qaarkod kaa fogaayn kara xidhidhada jarmaya iyo xanuun badan.
So download talooyin ka hortagga.
Waxad ka lumten qof ka mid ah qaraabadaadi dagalada awged ? ama jidka tahriib ? ama dhibaatoyin dabiici ah ? hayada Laanqayrta Cas ayaa laga yaabaa inay kuu caawiso.
Arag kalabkayaga radinta « Trace The Face ».
Is dhafsiga macluumadka (wararka).
Qof ka mid ah qaraabadaadi aya ku nool xaaladaha kaa horjoogsanaya inaad la xiriirto isaga ama iyada? ama haddii kale xabsii ayu ku jira ? ama Xaalad caafimaad ama xaalad bulsho oo adag ? Hayada Laanqayrta Cas ayaa laga yaabaa inay kaa caawiso dib usohelka qofkani ad jeceshahay.
Isu-keenidda qaraabada ama qoyska.
Waxaad haysataa ogolaansho joogitaan aan xad lahay oo ka soo jedda dhulka Belgian iyo barnaamijka Waxaad horay u haysataa feyl furan Adeegga dib u Dhiska ee Xidhiidhka Qoyska? Na soo wac si aad u aragto haddii iyo sida Laanqayrta Cas ay ku taageeri karto habka dib u mideynta qoyska.